Foormulaawwan karaa hedduu galchuu dandeessa: sajoolee fayyadamuu, ykn gabatee cuqoo irraa barreessuun, ykn makaa maloota lamaamiin.
Maadhee foormulaa keessa galchuu barbaadde cuqaasi.
Sajoo Dalagaa Kabala Foormulaa irraa cuqaasi.
Amma mallattoo walqixaa sarara naqaa keessaa argita akkasumas naqa foormulaa jalqabuu dandeessa.
Erga gatiiwwan barbaachisan galanii booda, bu'aa man'ee kaka'aa keessatti saaguuf Enter tuqi ykn Fuudhi cuqaasi. Yoo galfata sarara naqaa kee keessaa qulqulleessuu barbaadde, Escape tuqi ykn Dhiisi cuqaasi.
Gatiiwwanii fi foormulaawwan kallattiin maadheelee keessatti galchuus dandeessa, yoo qaree naqaa arguu baatteyyuu. Foormulaawwan mallattoo walqixaatiin jalqabuu qabu.
Foormulaa jalqabuuf + ykn - gabatee lakkoofsaa irraa tuquus dandeessa. NumLock "banaa" ta'uu qaba. Fakkeenyaaf, walitti aansiitii furtuuwwan kanaa gadii tuqi:
Bu'aa 42 man'ee keessatti argita. Man'een foormulaa =+50-8 qabata.
Yoo shallaggii tokkoon tokkoo miseensota foormulaa arguu barbaadde, miseensota barbaadde filiitii F9 tuqi. Fakkeenyaaf, foormulaa =IDA'A(A1:B12)*IDA'A(C1:D12) keessatti filannoo IDA'A(C1:D12) filadhuutii cita ida'ama bal'ina kanaa arguuf F9 tuqi.
Yoo yemmuu foormulaa uumtu dogoggorri uumame,ergaa dogoggoraa man'ee kaka'aa keessatti mul'ata.
Title is: Foormulaawwan Galchuu